Mucjisadii Computer-ka oo geeriyootay • Horseed Media
You are here: Home / Business / Local businesses / Mucjisadii Computer-ka oo geeriyootay
Mucjisadii Computer-ka oo geeriyootay
January 19, 2012 - By: Moha Salat
Waxa ay dunida Muslimka ahi todobaadkan weydey alle u naxariistee gabadhii loogu magac daray ilbaxadii Computer-ka , oo magaceeduna la yiraahdo Cafraa Kariim una dhalatay dalka Pakistan .
Tacsiyo fara badan ayaa dunida daafaheeda laga soo kala diray markii Sabtidii bilowgii todobaadkan la shaaciyay inay geeriyootay ilbaxadii yareyd ee Computer-ka Cafraa Kariim Randaawa oo ku geeriyootay Magaalada Feysal Abaad ee dalka Pakistan , iyadoo da’deeda lagu sheegay 16 jir ah , waxaana ay u geeriyootay qallal iyo wadnaha oo joogsaday.
Aas’aasaha Shirkadda Microsoft Bill Gates ayaa aad uga muragooday geerida gabadhaasi yar , isagoo horey u balan-qaaday inuu dusha u ridanayo dawenteeda , hayeeshee dhaqaatiirta Pakistan ayaa ka biya diiday in gabadha lagu daweeyo dibadda.
Bill Gates ayaa ku tilmaamay gabadhani inay laheyd hibo gaar ah oo dhanka Computerka ah , waxaana uu ugu magac daray mucjisadii computer-ka marka loo eego xirfadaheeda iyo ilbaxnimadeeda ku aadan Tiknoloojiyadda tan iyo yaraanteedii markii aabaheeda uu u iibiyay Computer si ay ugu adeegsato dirista Emailada.
Gabadhani waxa ay ka heshay shahaadada la yiraahdo ( Xirfadda lagu kalsoonyahay) Shirkadda Microsoft sanadkii 2005 , iyadoo xilligaasi da’deeda aaney gaarsiisneen sanadka sagaalaad ( 9 sano jir) waaana ay noqotay qofka ugu yar dunida ee shahaadadaasi hantiya.
Shahaadada ( Xirfadda lagu kalsoonyahay ) “MCP” ee ay bixiso shirkadda Microsoft waxaa la siiyaa shakhsiyaadka si hee rsare ah xirfadooda ugu sara maray dhanka Computer-ka iyo agabyada ay soo saarto shirkadda Microsoft .
Markii ay hanatay shahaadada , Cafraa waxaa ay casuumaad ka heshay Bill Gates, si ay u booqato xarunta shirkadda Microsoft ee Magaalada Washington , gabadha yar waxa ay booqatay dhamaan xafiisyada shirkadda , halkaa